IRyanair inweba izindiza zayo ezikhanseliwe kuze kube uMashi 2018 | Izindaba Zokuhamba
I-Ryanair inweba izindiza zayo ezikhanseliwe kuze kube nguMashi 2018
UCarmen Guillen | | General, Izaziso
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sikhulume ngokudabukisayo ukuthi Inkampani yezindiza iRyanair ukhansele inani elikhulu lezindiza ezihlelelwe umhlaka-28 Okthoba. Yebo, namuhla siyazi ukuthi iRyanair inweba izindiza zayo ezikhanseliwe hhayi ngaphansi kuze kube Mashi 2018. Kusho ukuthini lokhu? Bazoba yini abanye Abagibeli abangu-400.000 abathinteke kakhulu kusukela ngoNovemba, engeza kwisamba esivele sikhulu sokukhansela ngoSepthemba nango-Okthoba.
Ngakho-ke bakwenze kusuka ekukhululweni okubanzi ukuthi ungakufunda lapha Okufanayo lapho bafingqa khona isizathu sokukhanselwa okushiwo kanye nezikhumulo zezindiza ezizothinteka kakhulu kulokhu kukhanselwa.
Namuhla, iRyanair inezindiza ezingama-400, zazo Ama-25 azoyeka ukusebenza kuze kube usuku olubekiwe. Lokhu kucabanga ukuthi ebusika obuzayo, izokhansela inani lemizila engama-34, ababili babo abanezikhumulo zezindiza zaseSpain ezihilelekile. Lokhu akusathinti kuphela abagibeli abathenga la mathikithi endiza kepha nenkampani ebiza izindleko ephansi yase-Ireland, njengoba yehlise kakhulu izibikezelo zayo zokukhula.
Ehlobo lika-2018, iRyanair ihlela ukuba nemikhumbi yezindiza ezingama-445 isiyonke futhi sebevele baxwayisa ukuthi kulabo, abayi-10 babo bazohlala bengasebenzi ngenxa yenkinga efanayo ebakhathazayo namuhla: ukungqubuzana ngamaholide abashayeli bezindiza.
Kepha ake sifike entweni ebaluleke kakhulu: Yiziphi izindiza noma imizila yaseSpain kuze kube manje ethintekile kulokhu kukhanselwa? Ngokwenkampani yezindiza uqobo, kunjalo IGlasgow-Las Palmas noSofia-Castellón. IRyanair iphinde yaqinisekisa ukuthi abagibeli abanjalo sebazisiwe nge-imeyili "ukubanikeza ezinye izindiza noma ukubuyiselwa imali" kwamathikithi abo. Futhi bonke banxeshezelwe ngamakhuphoni ama-euro angama-40 (ama-80 endabeni yezindiza ezihamba ngamabhanoyi) ukuze bakwazi ukuhamba nenkampani phakathi kuka-Okthoba noMashi. Abagibeli abakhetha le nketho yokugcina kumele babhuke ithikithi ngo-Okthoba.
1 Imizila yendiza ekhanseliwe
2 Imibuzo ephendulwe nguRyanair
Imizila yendiza ekhanseliwe
Kokubili kwabafundi baseSpain abasilandelayo nalabo abasilandelayo abavela ngaphandle kwemingcele yethu, nayi yonke imizila ekhanseliwe kusuka ngoNovemba kuya kuMashi 2018:
IBucharest - iPalermo
USofia - Castellón
I-Chania - I-Athene
USofia - Memmingen
I-Chania - iPaphos
I-Chania - iThessaloniki
I-Sofia - Stockholm (NYO)
I-Cologne - Berlin (SXF)
I-Sofia - Venice (TSF)
I-Thessaloniki - Bratislava
IGlasgow - iLas Palmas
I-Thessaloniki - iParis BVA
IHamburg - Edinburgh
I-Thessaloniki - Warsaw (WMI)
IHamburg - Katowice
I-Trapani - Baden Baden
I-Hamburg - Oslo (TRF)
I-Trapani - Frankfurt (HHN)
IHamburg - iThesaloniki
I-Trapani - Genoa
I-Hamburg - Venice (TSF)
I-Trapani - Krakow
ILondon (LGW) - iBelfast
I-Trapani - iParma
ILondon (STN) - e-Edinburgh
I-Trapani - iRoma FIU
ILondon (STN) - IGlasgow
I-Trapani - iTrieste
INewcastle - UFaro
I-Wroclaw - iWarsaw
INewcastle - iGdansk
IGdansk - iWarsaw
Imibuzo ephendulwe nguRyanair
Okulandelayo, sikushiya neminye imibuzo ejwayelekile kakhulu ebuzwe ku-Ryanair emasontweni edlule ngokukhanselwa:
Ngabe le nkinga yokuqondaniswa kwe-A / L iziphinda ngo-2018?
Hhayi ngoba i-A / L izokwabiwa isikhathi esigcwele sezinyanga eziyi-12 ngo-2018.
Ngabe onke amakhasimende athintekile azisiwe ngalezi zinguquko esikhathini sasebusika?
Yebo, wonke amakhasimende athintekile athole izaziso ze-imeyili namuhla.
Ingabe lawa makhasimende okushintsha isikhathi anelungelo lokuthola isinxephezelo se-EU261?
Cha, njengoba lezi zinguquko zesheduli sezenziwe emavikini ama-5 kuya ezinyangeni ezi-5 ngaphambili, isinxephezelo se-EU261 asiveli.
Ngabe amanani azokhula ngenxa yalokhu kukhula okuhamba kancane?
IRyanair izoqhubeka nokunciphisa amanani. Uchungechunge lokuthengiswa kwezihlalo luzoqala ezinyangeni ezizayo kuqala ngokuthengiswa kwezihlalo okuyisigidi esingu-1 kule mpelasonto ngamanani ka- € 9,99 ngandlela-thile.
Ngabe kuzoba khona ukukhanselwa okwengeziwe?
Lokhu kukhula okuhamba kancane kusho ukuthi sizoba nezindiza ezingezinhle kanye nabashayeli bezindiza abasele ebusika nasehlobo lika-2018. Esontweni eledlule sisebenze izindiza ezingaphezu kwezingu-16.000 ngokukhanselwa okungu-3 kuphela, okukodwa ngenxa yokuvalwa komgwaqo no-1 ngenxa yokubi ukuchezukiswa.
Ngingazi kanjani ukuthi indiza yami ithintekile?
Uzobe uthole i-imeyili yokushintsha indiza evela eRyanair ngoMsombuluko, Septhemba 18, noma namuhla, ngoLwesithathu, Septhemba 27.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » I-Ryanair inweba izindiza zayo ezikhanseliwe kuze kube nguMashi 2018
Uhamba kanjani isonto lonke unesikhwama esisodwa sokuphatha
Ukuhambela okubalulekile kwe-6 edolobheni laseFlorence